Kaddib markii ay soo baxday inuu ka tagayo Juventus, waa kuwee labada kooxood ee kor kala socda xaaladda Cristiano Ronaldo? – Gool FM
(Yurub) 01 Abril 2019. Sida wararku ay sheegayaan labo ka mid ah kooxaha ka dhisan qaaradda Yurub ayaa diiradda ku haya xaaladda Cristiano Ronaldo, kaasoo dhowaan ay soo baxday inuu xagaagan ka tagayo naadiga Juventus.
Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa la soo sheegayaa inay yihiin kooxaha isha ku haya mustaqbalka Cristiano Ronaldo.
Weeraryahanka kooxda Juventus ayaa loo diiwaan-geliyey 21 gool oo uu dhaliyey 22 kulan oo uu saftay xilli ciyaareedkan 2019-20, inkastoo dhammaan kubadda cagta dalka Talyaaniga loo xannibay sababo la xiriira faafaha Coronavirus.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegayay in Juve lagu qasbi karo inay iska iibiso Ronaldo si ay uga jawaabto qalalaasaha oo ay u saxdo buugeeda xisaabaadka, iyadoo 35-sano jirka uu Isbuucii ku qaato Turin adduun dhan 496,000 oo gini.
Sida ay warinayso Jariiradda Marca, Ronaldo kooxdiisii hore ee Man United iyo naadiga reer France ee PSG ayaa dhaqaale ahaan awood u leh heshiiska ciyaaryahanka reer Portugal, waxaana ay noqon lahayd labada meelood ee ugu macquulsan ee gooldhaliyahan la la xiriiriyo haddii uu ka tago Juve.
Wararku waxa ay sidoo kale intaa ku darayaan in PSG ay u badan tahay inay iska iibiso mid ka mid ah Neymar ama Kylian Mbappe si ay u helaan Ronaldo, kaasoo arki doona qandaraaskiisa haatan ee Juve oo dhacaya sanadka 2022-ka.
Ciyaaryahankii hore ee Kooxda Real Madrid ayaa dhaliyay 53 gool 75 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan kooxda Maurizio Sarri tan iyo markii uu yimid.